Sacuudi Carabiya waxay maal-gelinaysaa mustaqbalka hadda oo leh 100+ hindiseyaal dhaqameed
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sacuudi Carabiya Warka » Sacuudi Carabiya waxay maal-gelinaysaa mustaqbalka hadda oo leh 100+ hindiseyaal dhaqameed
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Saudi Arabia ee FII
Hindisaha Maalgelinta Mustaqbalka (FII) ee Riyadh maanta, Wasiir ku-xigeenka Dhaqanka, Mudane Hamed bin Mohammed Fayez, wuxuu iftiimiyay liis cajiib ah oo ka badan 100 hindise dhaqameed, ka-qaybgal iyo dhacdooyin ka dhacaya Boqortooyada ka hor dhammaadka sanadka.
Jadwalka firfircoon ee kala duwan ayaa isugu jira dhacdooyin badan oo ay hogaaminayaan 25-ka hay’adood ee dhaqanka ee ay Wasaaradda dhaqanku bilowday tan iyo markii la aasaasay 3 sano ka hor.
Mudane Fayez waxa uu sheegay in dhaqanka Sucuudiga uu daaha ka qaadayo laguna tamar gelinayo xawli iyo xawli aan hore loo arag.
Himilada Boqortooyada waxay soo bandhigaysaa fursado badan oo ka mid ah ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa caalamiga ahba.
"Waqti xiiso leh ayay u tahay dhaqanka Sacuudiga. Toddobaadyada soo socda oo keliya, waxaan martigelin doonaa xafladeena ugu weyn ee caalamiga ah ee filimada, fanka ugu horreeya ee fanka iyo xafladaha caalamiga ah sida Fashion Futures iyo MDLBeast, "ayuu yiri Fayez FII. "Dhacdooyinkani waxay ka socdaan horumarka joogtada ah ee Boqortooyada si ay u kobciyaan hal-abuurka oo ay u abuuraan dhaqaale dhaqameed firfircoon gudaha Boqortooyada." Sacuudi Carabiya waxay horeyba si firfircoon uga qayb qaadatay warshadaha hal-abuurka caalamiga ah.
Calaamadaha kale ee horumarka degdega ah iyo hiigsiga cusub, Wasaaraddu waxay dejisay istaraatiijiyad furi doonta fursado maalgashi dhaqameed oo cusub iyada oo loo marayo PPPs ama shirkado wadaag ah, xoojinaya kaabayaasha ku xeeran warshadaha hal-abuurka ah, iyo fududaynta nidaaminta u oggolaanaysa ganacsiyadu inay horumaraan. Marka lagu daro baahida sii kordheysa ee dhaqanka ee Boqortooyada oo dhan, isbeddelka muuqaalka dhaqanka Sucuudigae waxa uu durba soo jiitay indhaha maalgashadayaasha caalamiga ah.
Mudane Fayez waxa uu si degdeg ah u tilmaamay in doorka Wasaaraddu aanu ku koobnayn horumarinta warshadaha hal-abuurka ah ee gudaha Boqortooyada, balse sidoo kale kordhinta iyo hagaajinta tayada is-weydaarsiga dhaqameed ee saaxiibadeeda caalamka.
"Aad baan ugu hanweynahay Boqortooyada inay si guul leh ugu ololayso dhaqanka iyo warshadaha hal-abuurka inay si rasmi ah qayb uga noqdaan wadahadalka G20," ayuu yidhi Mudane Fayez intii lagu guda jiray dood-cilmiyeedka. "Waxay bilaabantay intii lagu jiray madaxtinimada Sucuudiga sannadkii hore wayna socotay, taas oo macnaheedu yahay inaan hubinnay in dhaqanku uu meel joogto ah ku leeyahay tixgalinta G20 waana qayb ka mid ah ajendayaasha dhaqaalaha adduunka."